အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်း နှင့် ဟန်ချက်ထိန်း လေ့ကျင့်ခန်းများ - Hello Sayarwon
Kyaw Thura Htun မှ ရေးသားသည်။ 10/12/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်း က သင့် အဆစ်တွေကို ပျော့ပျောင်းစေပြီး အဆစ် တောင့်တင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေး တဲ့အပြင် လှုပ်ရှားမှုတွေ လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေစဉ် မှာလည်း အနာတရ ဖြစ်ခြင်းကို လျှော့ချပေး ပါတယ်။ ၅ မိနစ် ကနေ ၁၀ မိနစ် အထိ ညင်ညင်သာသာ အကြောလျှော့ခြင်းက သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို သွေးပူစေပြီး လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းအစရှိတဲ့ အေရိုးဗစ် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်စေပါတယ်။ တချို့ လူတွေကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးမှ အကြောလျှော့တာကို ပိုနှစ်သက် ကြပါတယ်။ အဲဒါကလည်း အဆင်ပြေ ပါတယ်။
အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းထဲမှာပါတဲ့ အချို့သော လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ကတော့ –
အားစိုက် အကြောလျှော့ခြင်း (ဥပမာ- ဒူးမြှောက်ခြင်း၊ ခြေနောက်ပြန်ကန်ခြင်း )
သင့် အနေနဲ့ အခြေခံ အကြောလျှော့ခြင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ အကြောလျှော့ခြင်းက သိမ်မွေ့ပြီး အပန်းပြေ ရပါမယ်။ သက်တောင့်သက်သာ မရှိခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း မဖြစ်နေရပါဘူး။
အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တော့မယ် ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေကို လိုက်နာပါ။
ဒီ အချက်တွေကို ပြုလုပ်ပါ။
အကြောလျှော့ရင်း အပန်းပြေ နေပါစေ။
သင် သက်တောင့်သက်သာ ရှိသလောက်ပဲ အကြောဆန့်ပါ။
အကြောဆန့်နေစဉ် အနေအထား တစ်ခုကို ၅ – ၁၅ စက္ကန့်အထိ ထိန်းထားပါ။
အားစိုက်ရတဲ့ အကြောဆန့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်တဲ့အခါ သင့် လှုပ်ရှားမှုတွေ တည်ငြိမ်ပါစေ။
သင် အကြောဆန့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နေစဉ် အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ရှူပါ။
သင် အကြောဆန့် နေစဉ် သင်တောင့်သက်သာ မဖြစ်တော့ရင် ရပ်လိုက်ပါ။
အကြောတွေပြေလျော့မယ် – နေ့စဉ် ပုံမှန်အကြောလျှော့ပေးတာက ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင် ပြေလျော့စေတာမဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကိုလည်း အဆင်ပြေပြေနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာပါ။
လှုပ်ရှားရ အဆင်ပြေစေနိုင်တယ်- အကြောပုံမှန်လျှော့ပေးတာက အဆစ်တွေ နဲ့ ကြွက်သားတွေကို ကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီး နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားနိုင်မှာပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာ အဆင်ပြေစေနိုင်တယ် – ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ခင်မှာ အကြေလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးခြင်းက ကြွက်သားတွေဆီကို သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေသလို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ကြွက်သားတွေ အဆစ်တွေ ထိခိုက်နာကျင်တာမျိုးမဖြစ်စေဘဲ အကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားနိုင်စေမှာပါ။
ကြွက်သားတွေဆီ သွေစီးဆင်းရောက်ရှိမှုကောင်းစေနိုင်တယ် – အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်ပေးတာက ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းနာကျင်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်း အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို အနေအထားမှန်စေတယ် – အရိုးနဲ့ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ရှားနိုင်စေမှာပါ။
ခါးနာမျိုးမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတယ် – ပုံမှန်အကြောလျှော့ပေးတာက နောက်ကျောနဲ့ခါးကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းနေတာကို ပြေလျော့စေနိုင်ပြီး ခါးမနာအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခါးကြွက်သားတွေကို သန်မာစေနိုင်သလို ခါးနာနေတာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့စေတယ် – စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းနေတာကို ကြုံဖူးမှာပေါ့။ အကြောလျှော့ပေးတာက စိတ်ဖိစီးမှုကို သိသိသာသာပြေလျော့စေမှာပါ။
စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေနိုင်တယ်- ပုံမှန်အကြောလျှော့ပေးတာက ကြွက်သားတွေကိုတင်ပြေလျော့စေတာမဟုတ်ပါဘူး ။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း ပြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောလျှော့ပေးတဲ့အခါ ဝင်သက် ထွက်သက်မှန်မှန်ရှုပေးပါ။
ခေါင်းကိုက်တာကို သက်သာစေနိုင်တယ် – တစ်ခါတလေမှာ ခေါင်းကိုက်နေတာက ကြွက်သားတွေတောင့်တင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ ကြွက်သားတွေ ပြေလျော့သွားတာကလည်း ခေါင်းကိုက်တာကို သိသိသာသာ သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
ဒီ အချက်တွေကို မပြုလုပ်ပါနဲ့။
အကြောဆန့်နေစဉ် ခုန်တာတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကို နိမ့်လိုက် မြင့်လိုက် ပြုလုပ်ခြင်း။
နာကျင်နေသည့် နေရာသို့ အားစိုက်ပြီး ပြုလုပ်ခြင်း
ဟန်ချက်ထိန်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေက သင့်ကို သင့်ခြေထောက်ပေါ်မှာ ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ မှန်မှန် ရပ်နေစေနိုင်ပြီး ချော်လဲခြင်း အနာတရဖြစ်စေခြင်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ဟန်ချက်ထိန်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေက အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးသူတွေ လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီး ပါတယ်။
ဟန်ချက်ထိန်း လေ့ကျင့်ခန်း ဥပမာ တချို့ကတော့-
နောက်ပြန်သို့မဟုတ် ဘေးတိုက် လမ်းလျှောက်ခြင်း
ဖနောင့် နဲ့ ခြေဖျား တစ်ဖြောင့်တည်း လမ်းလျှောက်ခြင်း
ခြေ တစ်ဖက် ထောက်ရပ်ခြင်း
ဒါတွေက လူ့ ကိုယ်အောက်ပိုင်း သာမက အဓိက ကြွက်သားတွေရဲ့အားကိုလည်း ပိုပြီး ဟန်ချက်ညီအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟန်ချက်ညီစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေး နိုင်မှာပါ။
5 Best Exercises for People with Diabetes.
https://health.clevelandclinic.org/2014/06/5-best- exercises-for-people-with- diabetes/.
http://www.diabetes.org/food-and- fitness/fitness/types-of-activity/stretching-and- balance-exercises.html.
ကာလကြာမြင့်စွာ နာကျင်မှုကိုခံစားနေရသူများအတွက် အထောက်အကူပြုစေမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ